विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो, उज्वलको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता, कता गइन रन्जु दर्शना ? — sancharkendra.com
विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो, उज्वलको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता, कता गइन रन्जु दर्शना ?
काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीति गर्दै आएको भनिएको पार्टी विवेकशील साझा अन्ततः विभाजित भएको छ।। केही दिनअघि पार्टी संयोजक उज्ज्वल थापाले पार्टी रणनीतिको समीक्षाका लागि १८ पानाको प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टीभित्र चरम मदभेद सुरु भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि रवीन्द्र मिश्र र थापाबिचको बिबाद छताछुल्ल भएको थियो ।
पार्टीका ३५ मध्ये १६ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको एक नेताले बताए। पार्टीको नाम ‘विवेकशील नेपाली दल’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त पार्टीमा ३७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका १६ जना निर्वाचन आयोगमा गएका छन्, जसमा रञ्जु दर्शनादेखि प्रदेश ३ का दुई सांसद विराज भट्ट श्रेष्ठ र रमेश पौडेलसम्म छन् ।
थापाले हालै मात्र पार्टी गलत बाटोमा हिँडिरहेको निष्कर्षसहित समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि अर्का संयोजक रवीन्द्र मिश्र पक्षले भने त्यसमाथि छलफल गर्नुको साटो ६ जना केन्द्रीय सदस्य सिफारिस गर्ने, विभागहरु भंग गर्ने र महिला तथा युवा संगठन बनाउने सिफारिस गरेपछि उज्वल थापा समूहले नयाँ दल गठन गरेका हुन् ।
‘हामीले भन्दै आएको सुसंस्कृत र बैकल्पिक राजनीति हुँदैन भन्ने लाग्यो’ एक नेताले भने, ‘यसरी सँगै बस्नुभन्दा अलग अलग रुपमा बस्नु बेस भन्ने भयो ।’ रवीन्द्र मिश्र संयोजक रहेको साझा पार्टी र थापा संयोजक रहेको विवेकशील नेपाली दलबीच २०७४ साउन ११ गते एकता भएको थियो।